Volkswagen Touran occasion 2012 in Heeswijk-Dinther
1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE *
Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE * Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfl. BlueM * NAVIGATIE *
KM stand 93.006
Het betreft een aantoonbaar eerste eigenaar schadevrij bereden touran in volledige nieuwstaat zowel van binnen als van buiten. Complete dealer historie aanwezig en uiteraard ter inzage. Zeer rijkelijk uitgerust zie ook de foto,s .